မြရွက်ဝေ: August 2008
ရွာတရွာမှာ အပြေးအလွန်တော်တဲ့လူတစ်ယောက် ရှိတယ်။
တော်တော်ကို အပြေးမြန်လွန်းလို့ အားလုံးက "အပြေးချံပီယံ"လို့ ခေါ်ကြတယ်။
တနေ့မှာ "အပြေးချံပီယံ"က သူခိုးနောက်ကို ပြေးလိုက်နေတုန်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေလာတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ သွားဆုံတယ်။
"ဟ! ဘာဖြစ်တာတုန်း? ဒီလောက်ထိ အလျှင်စလို ဖြစ်နေရတာတုန်းကွ?"
လို့ သူငယ်ချင်းက မေးတဲ့အခါ "အပြေးချံပီယံ"က
"ဘာရယ်! သူခိုး ဟုတ်လား! ဘယ်မှာလဲ? ဘယ်မှာလဲ?"
"ဟိုးမှာလေ၊ နောက်ကနေ ပြေးလာလိမ့်မယ်"
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက မျောက်ရယ်၊ မြေခွေးရယ်၊ ယုန်ရယ်က ဘုရားသခင်ထံ သွားလျှောက်တယ်။
"အရှင်ဘုရား လူသားအဖြစ် ပြန်လည်မွေးဖွားအောင် စောင့်ရှောက်တော်မူပါ"
"လူသားအဖြစ်ရချင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်နဲ့ လူတွေကို တည်ခင်းကျွေးမွေးပါ"
ဒါနဲ့ မျောက်က တောင်ပေါ်ကနေ သစ်ချသီး၊ တည်သီးတွေ ယူလာတယ်။
မြေခွေးက ချောင်းထဲကနေ ငါးတွေ ဖမ်းလာတယ်။
ဒါပေမယ့် ယုန်ရဲ့ စားစရာက နူးညံ့တဲ့ မြက်ပင်တွေဖြစ်တယ်။
အခုက ဆောင်းတွင်းဖြစ်လို့ နူးညံ့တဲ့ မြက်တွေ တစ်ပင်မှ မရှိပါဘူး။
ယုန်က စိတ်ဓာတ်ကျပြီး မျောက်နဲ့ မြေခွေးတို့ဆီ ပြန်လာခဲ့တယ်။
"ဖိုးရွှေယုန်၊ မင်းရဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ ဘယ်မှာလဲ"
"ဟင်အင်း၊ မြက်တွေ အားလုံး ခြောက်ကုန်ပြီ။ သစ်ဖူးတွေလဲ မထွက်သေးဘူး"
လို့ ဖြေလိုက်တဲ့အခါ မျောက်က
"ဒါဆို မင်းတော့ အမြဲတန်း ယုန်ဖြစ်နေတော့မှာ"
"ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်။ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ မရှိဘဲနဲ့ မင်းဘယ်လိုလုပ် လူဘဝ ဝင်စားလို့ ရမှာလဲ"
"တောင်းပန်ပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ ထပ်စောင့်ပေးပါဗျာ"
နောက်ရက်မှာ ယုန်က တောင်ပေါ်သွားပြီး သစ်ခြောက်တွေ စုလာခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ မျောက်နဲ့ မြေခွေးရှေ့မှာ သစ်ခြောက်တွေ ပုံလိုက်ပြီး ဒီလို ပြောလိုက်တယ်။
"ခု စားကောင်းသောက်ဖွယ် ချက်ပေးမှာမို့ မီးညှိပေးပါ"
မျောက်နဲ့ မြေခွေးက မီးညှိပေးလိုက်တဲ့အခါ သစ်ခြောက်တွေက ဝုန်းခနဲ မီးထတောက်တော့တယ်။
"ကျနော့ရဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်က မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်.... ဒါကြောင့် ကျနော့ကို ကင်ပြီး လူသားတွေအတွက် စားသောက်ဖွယ်လုပ်ပါ့မယ်"
လို့ပြောပြီး မီးပုံထဲ ခုန်ချလိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်းကင်ကနေ ဘုရားရှင် ကြွလာပြီး ဖျက်ခနဲ ယုန်ကို ပွေ့ချီပြီး ကောင်းကင်ကို ပြန်တက်သွားတယ်။
အဖြစ်အပျက်က မြန်လွန်းတာမို့ မျောက်ရော မြေခွေးပါ လန့်ဖျန့်သွားတယ်။
"မျောက်ရော မြေခွေးပါ လူသားအဖြစ် ပြန်လည်မွေးဖွားခွင့်ရဖို့ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို ကိုယ့်ရဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေနဲ့ လူသားတွေကို ကျွေးမွေးလို့ဘဲ။ ချီးကျူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုန်ကို ပိုပြီး ချီးကျူးမိတယ်။ ကိုယ့်အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လူသားတွေကို ကျွေးမွေးချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ယုန်ကို 'လမင်း'တိုင်းပြည်ကိုခေါ်သွားမယ်။ အဲဒီမှာ တသက်လုံး ပျော်ရွှင်အောင်ထားမယ်"
လို့ ပြောရင်း ဘုရားရှင်က ယုန်ကို ပွေ့ပိုက်ယင်း ကောင်းကင်အမြင့်ထဲ တက်သွားတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစလို့ ယုန်က လမင်းပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်သွားပါတော့တယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 12:30 PM5comments
ထမင်းဆုပ်လေး ♪ ဂလုတ် ~ ဂလုတ် ♪
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သစ်ခုတ်သမား အဖိုးအိုက တောထဲမှာ နေ့လည်စားစားဖို့ သစ်မြစ်ပေါ်ထိုင်ရင်း ထမင်းဘူးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။
"အိမ်က အဖွားကြီး ဆုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ထမင်းဆုပ်က သိပ်အရသာရှိတာ"
တစ်ယောက်ထဲစကားပြောရင်း ဝါးဖက်နဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ ထမင်းထုပ်ကို ဖြည်လိုက်တုန်းမှာ
"ဘုတ်" ဆို ထမင်းဆုပ်တစ်ခုက မြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျပြီး ဂလုတ် ~ ဂလုတ် နဲ့ ဘေးနားက တွင်းပေါက်ထဲ လိမ့်ကျသွားတော့တယ်။
အဖိုးအိုက တွင်းထဲချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တွင်းနက်ထဲက ဒီလို သီချင်းသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။
♪ထမင်းဆုပ်လေး ဘုတ်ခနဲ ဂလုတ် ~ ဂလုတ်
♪ဂလုပ် နဲ့ တွင်းထဲလိမ့်ကျ♪
ဒီလောက်သာယာတဲ့အသံ တခါမှ မကြားဖူးဘူး။
ဘာပါလိမ့်။ ရော့ နောက်တခု"
အဖိုးအိုက ထမင်းဆုပ် နောက်တခုကို တွင်းထဲ ပစ်ချကြည့်လိုက်တယ်။
အဲဒီအခါ သီချင်းသံက ပြန်ကြားရပြန်တယ်။
♪ထမင်းဆုပ်လေး ဘုတ်ခနဲ ဂလုတ် ~ ဂလုတ် ~
♪ဂလုပ်~ နဲ့ တွင်းထဲလိမ့်ကျ~♪
အဖိုးအိုက အတော်ပျော်သွားပြီး ထမင်းဆုပ်တွေအားလုံးကို တခုမှ မစားဘဲ တွင်းထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
နောက်ရက်မှာ အဖိုးအိုက မနေ့ကထက် ထမင်းဆုပ်တွေ ပိုယူခဲ့ပြီး တောင်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်။
နေ့လည်ရောက်တဲ့အခါ ဂလုတ် ~ ဂလုတ် ~ ဆိုပြီး ထမင်းဆုပ်တွေကို တွင်းထဲချကြည့်တယ်။
ချလိုက်တိုင်း တွင်းထဲကနေ မနေ့ကလို သီချင်းသံလေးကို ကြားရတယ်။
"အယ်~ ထမင်းဆုပ်တွေ ကုန်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ထပ်နားထောင်ချင်သေးတယ်။ ..ဟာ! ဟုတ်ပြီ၊ တွင်းထဲဝင်ပြီး တောင်းပန်ကြည့်ရမယ်"
အဖိုးအိုက ထမင်းဆုပ်လိုမျိုး တွင်းထဲ လှိမ့်ဆင်းလိုက်တယ်။
တွင်းထဲရောက်တော့ ရေတွက်လို့မရနိုင်အောင်များတဲ့ ကြွက်တွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
"ကြွပါ၊ အဖိုးအို ခင်ဗျာ၊ အရသာရှိတဲ့ ထမင်းဆုပ်တွေ စားရလို့ အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"
ကြွက်တွေက ခေါင်းသေးသေးလေးတွေကို ညွတ်ပြီး အဖိုးအိုကို အရိုအသေပေးကြတယ်။
"ကဲ! ဒီတစ်ခါ ကျနော်တို့အလှည့်ပါ၊ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ကောက်ညင်းဆန်ထောင်းပြီး ကျွေးပါ့မယ်"
ကြွက်တွေက သစ်ဆုံနဲ့ ထောင်းတံကို ထုတ်လာပြီး
♪ဒုန်း~ ကြွက်ကလေးတွေ ကောက်ညင်းထောင်းတယ်
♪ဒုန်း~ ဒုန်း~ တွင်းထဲမှာကွယ်~♪
လို့ သီချင်းဆိုရင်း ကောက်ညင်းကို စထောင်းကြတယ်။
"ဒါ အရသာ အရမ်းရှိတဲ့ ကောက်ညင်းဘဲ။ သီချင်းရော ကောက်ညင်းပါ နတ်သုဒ္ဓာလိုပါဘဲလား"
အဖိုးအိုကို ကျွေးမွေးရုံသာမက လိုချင်တာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် ဆုတောင်းပြည့်အဆောင်လေးကို လက်ဆောင်ရလိုက်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။
လို့ အဖိုးအိုက မေးလိုက်တယ်။
"အင်းနော်.. လိုချင်တာတွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးရရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်မလဲ"
အဖိုးအိုက အဆောင်လက်ဖွဲ့ကို လူပုံသဏ္ဍန်လို လုပ်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အဖိုးအိုရဲ့ တင်ပုလင်ခွေပေါ်မှာ ကလေးလေး ပေါ်လာတယ်။
တကယ့် လူသား ကလေးအစစ်လေးပါ။
အဲဒီအချိန်ကစလို့ အဖိုးအိုနဲ့ အဖွားအိုက ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။
ဟိုးတုန်းက ရွာတရွာမှာ သူဆင်းရဲတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။
တညနေမှာ သူ့ဆီကို မုတ်ဆိတ်ဖြူတွေနဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့တယ်။
"ဟာ! ဟုတ်လား။ ဒုက္ခတွေ့လာတာပေါ့။ တည်းပါ ခင်ဗျာ၊ ရပါတယ်"
သူဆင်းရဲဟာ ရိုရိုသေသေနဲ့ အဖိုးအိုကို တည်းခိုခွင့် ပြုလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ရက်မှာ အဖိုးအိုက သေးငယ်တဲ့ ကျောက်ဆန်ထောင်းဆုံကို လက်ဆောင်ပေးပြီး
"တည်းခိုခွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ပေးတာ။ ဒါ ထူးခြားတဲ့ ကျောက်ဆုံကွဲ့။ ညာဘက်ကို လှည့်ရင် လိုချင်တာတွေ ထွက်လာမယ်၊ ဘယ်ဘက်ကို ပြန်လှည့်ရင်တော့ ထွက်တာတွေ ရပ်သွားမယ်။ မရပ်ခင်အထိ ဆက်တိုက်ထွက်နေမှာမို့ သတိတော့ထားကွဲ့"
သူဆင်းရဲဟာ ကျောက်ဆုံကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။
အဲဒီအခါ ကျောက်ဆုံထဲကနေ ဖြူဖွေးနေတဲ့ ဆန်တွေ ထွက်ကျလာတယ်။
အလျင်စလိုနဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အခါ ဆန်ထွက်တာ ရပ်သွားတယ်။
သူဆင်းရဲက ဆန်တွေ ငါးတွေ အများကြီး ထွက်ကျလာအောင်လုပ်ပြီး ဘေးနားက အိမ်တွေကိုပါ လိုက်ဝေပေးတယ်။
သူဆင်းရဲရဲ့ အိမ်နားမှာ လောဘကြီးတဲ့ အကိုတစ်ယောက်နေတယ်။
အဲဒီ အကိုက သူ့ညီ ရုတ်တရက် ချမ်းသာလာတာကို မသင်္ကာလို့ တိတ်တိတ်လေး လာချောင်းကြည့်တယ်။
"တယ်ဟုတ်ပါလား။ အားလုံးက ဟို ကျောက်သားဆုံရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့။ ပွတာဘဲ"
ညဘက်ရောက်တော့ အကိုဖြစ်သူဟာ အိမ်ထဲတိတ်တဆိတ်ဝင်ပြီး ကျောက်ဆုံကို ခိုးသွားတော့တယ်။
ပြီးတော့ လှေနဲ့ ပင်လယ်ထဲကို ထွက်ပြေးလာတယ်။
အကိုဖြစ်သူက လှေကို အားကုန် လှော်ခတ်လာတာကြောင့် ဗိုက်ဆာလာတယ်။
အဲဒါနဲ့ ယူလာတဲ့ ထမင်းဆုပ်ကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး
"ဟုတ်ပြီ။ ဆားဖြူးစားရင် ပိုအရသာရှိမှာ။ လာလေရော့! ဆားတွေထွက်၊ ဆားတွေထွက်"
လို့ ကျောက်ဆုံကို လှည့်လိုက်တာ ဆားတွေ မတရား ထွက်ကျလာပြီး ချက်ချင်း လှေထဲ အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်။
"အားးးးးးး ရပ်! ခုရပ်! ရပ်ပါတော့"
လောဘသား အကိုက ကျောက်ဆုံကနေ ပစ္စည်းတွေ ထွက်ကျလာတဲ့နည်းကိုဘဲ သိပြီး ပြန်ရပ်အောင်လုပ်ဖို့နည်းကို မကြည့်မိဘူး။
ဆားတွေက လှေထဲ တဖြည်းဖြည်းများလာပြီး နောက်ဆုံး လှေလဲ ပင်လယ်ထဲ နစ်မြုပ်သွားတော့တယ်။
ခုထက်ထိတိုင် အဲဒီကျောက်ဆုံက လည်နေပြီး ဆားတွေကို ထုတ်နေတုန်းပါဘဲ။
ဒါကြောင့် ပင်လယ်ရေတွေက ငံနေရတာပေါ့ကွယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 7:52 PM6comments
Posted by မြရွက်ဝေ at 3:09 PM9comments
သရဲပုံတွေ ဘာသာပြန်ရတာ ရေးရင်းကိုယ့်ဘာသာလန့်နေရတာမို့ ဒီတခါ ဂျပန်ရဲ့ ရိုးရာ ရာဇဝင်ပုံပြင်တွေ ရေးလိုက်ပါတယ်။ သရဲပုံပြင်တွေက "ပုံပြင်တစ်ရာ"ဆိုပြီး အပုဒ် ၁၀၀ တိတိရှိပါတယ်။ တော်ကြာအပုဒ် ၁၀၀လုံး ဘာသာပြန်လို့ပြီးတဲ့အခါ သရဲလာခြောက်မှာ စိုးရတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်တွေ ပြောင်းဖတ်နေတာ။ ဘာသာပြန်ဖို့ ဆီပုံးမှာ လာအော်တဲ့ ကိုနိလဲ သားသားမီးမီးလေးရရင် ပုံပြင်တွေ ပြောပြလို့ရအောင်လို့။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ရွာတရွာမှာ အဖိုးအိုနဲ့ အဖွားအိုတို့ နေထိုင်ကြတယ်။
သူတို့မှာ သားသမီးမရှိလို့ "ဖိုးဖြူ"လို့ခေါ်တဲ့ ခွေးလေးကို သားသမီအဖြစ်အရမ်းချစ်ကြတယ်။
တရက်မှာ "ဖိုးဖြူ"က လယ်ကွက်ထဲမှာ ဟောင်နေတယ်။
"ဒီနေရာကိုတူး ဝုတ်-ဝုတ်၊ ဒီနေရာကိုတူး ဝုတ်-ဝုတ်"
"ဟယ်? ဒီနေရာကိုတူးလို့ ဟောင်နေတာများလား။ ကောင်းပြီ ကောင်းပြီ၊ တူးကြည့်တာပေါ့ "
မြေကြီးထဲကနေ ရွှေပြားငွေပြားတွေ အများကြီး ထွက်လာတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့ အိမ်နီးချင်း လောဘသမား အဖိုးအိုက
"ငါလည်း ရွှေပြားငွေပြားတွေ ရအောင်လုပ်မယ်။ မင်းခွေး"ဖိုးဖြူ"ကို ငါ့ ခဏငှါး"
လောဘသမား အဖိုးအိုက "ဖိုးဖြူ"ကို အတင်းအကြပ် လယ်ထဲဆွဲခေါ်သွားတယ်။
ပြီးတော့ မနှစ်သက်တဲ့ "ဖိုးဖြူ"က ကိန် ကိန်လို့ အော်တဲ့နေရာကို တူးကြည့်တဲအခါ ပုပ်နေတဲ့ အမှိုက်တွေအများကြီး ထွက်လာတယ်။
စိတ်တိုနေတဲ့ လောဘသားအဖိုးအိုက "ဖိုးဖြူ"ကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်။
"ဖိုးဖြူ"ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အဖိုးအိုနဲ့ အဖွားအိုက ငိုယိုပြီး "ဖိုးဖြူ"အလောင်းကို လယ်ကွက်ထဲမှာ မြှုပ်ပြီး သစ်သားတိုင်စိုက်လို့ အုပ်ဂူလေး လုပ်ပေးထားလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ရက်မှာ အဖိုးအိုနဲ့ အဖွားအိုက "ဖိုးဖြူ"ရဲ့ အုတ်ဂူကို အလွမ်းပြေသွားတဲ့အခါ "ဖိုးဖြူ"ရဲ့ အုတ်ဂူက သစ်သားတိုင်က တညထဲနဲ့ သစ်လုံးကြီး ဖြစ်နေတယ်။
အဖိုးအိုနဲ့ အဖွားအိုလည်း အဲဒီသစ်လုံးကြီးနဲ့ ဆန်ကြိတ်ဆုံလုပ်ပြီး ကောက်ညင်းဆန်ကို ဖွပ်ကြတယ်။
အဲဒီအခါ ထူးဆန်းလှစွာနဲ့ ကောက်ညင်းတွေကြားကနေ ရတနာတွေ အများကြီး ထွက်လာကျတယ်။
ဒါကိုကြားတဲ့ လောဘသမား အဖိုးအိုက
"ငါလည်း ကောက်ညင်းဆန် ဖွတ်ပြီး ရတနာတွေရအောင်လုပ်မယ်။ မင်းဆုံကို ငါ့ငှါးစမ်း"
လို့ ဆုံကို အတင်းအကြပ်ငှါးယူသွားပြီး အိမ်ရောက်တော့ ကောက်ညင်းဆန် ဖွပ်ကြည့်တယ်။
ဒါပေမယ့် ထွက်လာသမျှအားလုံးက ကျောက်ခဲတွေဘဲဖြစ်တယ်။
စိတ်တိုနေတဲ့ လောဘသားအဖိုးအိုဟာ ဆုံကို ပုဆိန်နဲ့ပေါက်ပြီး မီးရှို့ပြစ်လိုက်တယ်။
တန်ဖိုးထားရတဲ့ ဆန်ကြိတ်ဆုံကို မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ အဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုက ပြာတွေကို ဇကာနဲ့ထည့်ပြီး ပြန်ဖို့လုပ်ကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ပြာတွေက လေနဲ့လွင့်ပြီး သစ်ခြောက်ပင်မှာ အသာအယာ ကပ်ကုန်တယ်။
အဲဒီအခါ ပြာတွေကပ်သွားတဲ့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ သစ်ပင်က ဆာခူရာတွေ အပြည့်ပွင့်ကုန်တော့တယ်။
"ခြောက်သွေ့နေတဲ့ သစ်ပင်က ပန်းတွေပွင့်စေရော့ဟယ်~~"
လို့ ပြောရင်း ပြာတွေပက်ရင်းနဲ့ သစ်ခြောက်ပင်ကို ပန်းတွေပွင့်အောင် လုပ်တော့တယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီအနားကို ရှင်ဘုရင်က တိုင်းခန်းလှည့်းလည်တာတဲ့ ကြုံသွားတယ်။
ရှင်ဘုရင်က အတော်ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီး အဖိုးအိုကို ဆုလက်ဆောင် အများကြီး ပေးသနားတော်မူလိုက်တယ်။
ဒါကိုမြင်တဲ့ လောဘသမား အဖိုးအိုက
"ငါလည်း ပန်းပွင့်အောင်လုပ်ပြီး လက်ဆောင်ပဏ္ဏာရအောင်လုပ်မယ်။ အဲဒီပြာတွေ ငါ့ကိုပေးစမ်း"
အတင်းအကြပ် ပြာတွေလုယူပြီး ဘုရင်ကို သွားလျှောက်တယ်။
"ဘုရင်မင်းကြီး ဒီပြာတွေက ကျွန်တော်မျိုး ပိုင်တာပါ။ ကျွန်တော်မျိုးက သစ်ခြောက်ပင်ကို ပန်းပွင့်အောင်လုပ်ပြပေးမယ့်အတွက် ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်း ဆုလက်ဆောင် ပေးသနားပါ။ ကဲ-- လာလေရော့--"
လောဘသား အဖိုးအိုက ဘုရင်မင်းမြတ်ရှေ့မှာ ပန်းတွေ အများကြီးပွင့်တာ ပြချင်လို့ ပြာတွေအားလုံးကို တပြိုင်ထဲ ပက်လိုက်တယ်။
ဒီအခါ ပြာတွေက ရှင်ဘုရင်ရဲ့ မျက်လုံးထဲ ဝင်ကုန်လို့ လောဘသမား အဖိုးအိုလည်း အမျက်တော်ရှခံရပြီး သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက လူငယ်တစ်ယောက်က ဘုရားကျောင်းသွားပြီး "ကန်နွန်း"အရှင် (နတ်ဘုရားအမည်)ဆီမှာ ဆုတောင်းတယ်။
ဒီအခါ "ကန်နွန်း"အရှင်က မိန့်ကြားတယ်။
"ဒီကနေထွက်ပြီး ပထမဆုံး ဆုပ်ကိုင်မိတဲ့အရာက မင်းကို သူဋ္ဌေးဖြစ်စေလိမ့်မယ်"
ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူငယ်က ဘုရားကျောင်းက ထွက်လိုက်တာနဲ့ ကျောက်ခဲနဲ့ ခလုတ်တိုက်မိပြီး ဒလိမ့်ကောက်ကွေး ပြုတ်ကျသွားတယ်။
အဲဒီအခါ ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ကို ဆုပ်ကိုင်မိသွားတယ်။
"'ကန်နွန်း'အရှင် မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ ပထမဆုံး ဆုပ်ကိုင်မိတဲ့အရာတဲ့ ဒါများလား? အင်းမ်... ဒါနဲ့ သူဋ္ဌေးဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မထင်ပေမယ့်လည်း...."
လူငယ်က ခေါင်းလိမ်စဉ်းစားရင်း လမ်းလျှောက်လာတုန်း ပိတုံးတစ်ကောင်က တဝီဝီပျံလာတယ်။
လူငယ်က ပိတုံးကောင်ကိုဖမ်းပြီး ကောက်ရိုးဖျားမှာ ချည်ပြီးဆော့ရင်း ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။
ဒီအခါ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်က သားနားတဲ့ကားတစ်စီးလာရပ်ပြီး အထဲက ကလေးငယ်ကပြောလိုက်တယ်။
"အဲဒီ ပိတုံး လိုချင်လို့ပါ"
"အင်း ရတယ်၊ ယူလေ"
လူငယ်က ကလေးကို ပိတုံးချည်ထားတဲ့ ကောက်ရိုးမျှင်ကို ပေးလိုက်တဲ့အခါ နောက်လိုက်အိမ်ထိန်းက ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ လိမ္မော်သီး ၃လုံးပေးလိုက်တယ်။
ဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါ လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် လည်ချောင်းခြောက်လိုက်တာဆိုပြီး ညည်းညူနေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
"ရော့၊ အစား လိမ္မော်သီးစားပါ"
အမျိုးသမီးက လိမ္မော်သီးစားပြီး ကျန်းမာလာတယ်။
ဒါကြောင့် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ အရမ်းလှတဲ့ ပိတ်အုပ်ကို ပေးလိုက်တယ်။
"ဒီတခါ လိမ္မော်သီးက ပိတ်စဖြစ်လာပြီ"
လူငယ်က ပိတ်စကို ကိုင်ပြီး လျှောက်လာတုန်း ခွေလဲနေတဲ့ မြင်းတစ်ကောင်နဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တယ်။
"မြင်းက ရောဂါနဲ့ လဲနေလို့။ မြို့ကိုသွားပြီး ပိတ်စနဲ့ လဲလှယ်မလို့ စိတ်ကူးထားတာ။ ဒီနေ့မှ ပိတ်စမရရင်တော့ ဒုက္ခပါဘဲ"
"ဒါဆို ဒီပိတ်နဲ့ မြင်းနဲ့ လဲမလား?"
လူငယ်က ပြောလိုက်တဲ့အခါ အမျိုးသားလည်း ဝမ်းသာအားရနဲ့ ပိတ်စကိုယူပြီး ပြန်သွားတော့တယ်။
လူငယ်လည်း မြင်းကို ရေတိုက်လိုက် ကိုယ်ကိုပွတ်သပ်လိုက် လုပ်ပေးတဲ့အခါ မြင်းက နဂိုလို ပြန်ကျန်းမာလာတယ်။
သေချာကြည့်မိတဲ့အခါ အတော်ခန့်ညားသန်မာတဲ့ မြင်းဖြစ်နေတယ်။
"ဒီတခါတော့ ပိတ်စက မြင်းဖြစ်လာပြီ"
မြင်းကို ဆွဲပြီး လမ်းလျှောက်လာတုန်း ဒီတစ်ခါ အိမ်ပြောင်းနေတဲ့ မိသားစုနဲ့ တွေ့တယ်။
ဒီအခါ အိမ်ရှင်အမျိုးသားက လူငယ်ရဲ့ မြင်းကိုကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
"ရုတ်တရက် ခရီးထွက်ဖို့ ဖြစ်လာလို့၊ မြင်းလိုနေတာ၊ အဲဒီမြင်းနဲ့ ငါ့အိမ်ရယ် လယ်ရယ်နဲ့ လဲလှယ်နိုင်မလားကွယ့်"
လူငယ်က ကြီးကျယ်ခန့်ညားတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ လယ်တွေ ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီး သူဋ္ဌေးကြီး ဖြစ်လာတယ်။
ကောက်ရိုး တစ်မျှင်ကနေ သူဋ္ဌေးကြီးဖြစ်လာလို့ အားလုံးက အဲဒီလူငယ်ကို "ကောက်ရိုးသူကြွယ်"လို့ ခေါ်ကြသတဲ့ကွယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 10:10 AM5comments
Posted by မြရွက်ဝေ at 10:50 PM5comments
Posted by မြရွက်ဝေ at 5:32 PM 10 comments